Nhazi ọkwa ihu igwe Köppen: njirimara na udiri ihu igwe | Network Meteorology
Enwere ike ịmepụta ihu igwe ụwa n'ụzọ dị iche iche dịka ụfọdụ mgbanwe na oke. Ọ dị mkpa iji nwee ike ịkọwa ihu igwe iji guzobe usoro na nkesa nke ọtụtụ ụdị anụmanụ na osisi, ụkpụrụ ụlọ, nhazi obodo, amụma ihu igwe, wdg. Otu n'ime ha bụ Nhazi ọkwa ihu igwe Köppen. Ọ bụ usoro gbadoro ụkwụ na ahịhịa sitere n'okike nwere mmekọrịta doro anya na ihu igwe, ya mere edobela oke n'etiti otu ihu igwe na nke ọzọ na-eburu n'uche nkesa ahịhịa na ebe a kapịrị ọnụ.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe nhazi ọkwa ihu igwe Köppen gbadoro na ihe bụ isi njirimara ya.
2 Nhazi ọkwa ihu igwe Köppen: udiri ugwu
2.1 Otu A: udu mmiri
2.2 Group B: akọrọ climates
2.3 Nhazi ọkwa ihu igwe Köppen: otu C
Nhazi nke ihu igwe Köppen gbadoro ihu na ihu igwe gbadara ebe nkesa ufodu udiri. Oke iji nwee ike ikpebi ihu igwe nke mpaghara na-abụkarị oge okpomọkụ na mmiri ozuzo kwa afọ na kwa ọnwa. A na-elekarị oge nke mmiri ozuzo anya. N'okwu a, ọ bụ ihe dị iche.
Ọ na-ekewa ihu igwe ụwa ụzọ ise: ebe nke okpomoku, ala kpọrọ nkụ, ọnọdụ ihu igwe, kọntinent, na polar, nke mkpụrụedemede izizi mara. Ìgwè nke ọ bụla bụ otu subgroup nke ọ bụla bụ ụdị nke ihu igwe.
Emebere nhazi ọkwa ihu igwe Köppen site na mbụ onye dibia bekee bu Wladimir Köppen na 1884, ma mesịa gbanwee ya na Rudolf Geiger, na-akọwa ụdị ihu igwe ọ bụla nwere ọtụtụ akwụkwọ ozi, na-abụkarị atọ, na-egosi omume nke ọnọdụ okpomọkụ na mmiri ozuzo. Ọ bụ otu n'ime nhazi ihu igwe kachasị eji eme ihe n'ihi oke ya na ịdị mfe ya.
Nhazi ọkwa ihu igwe Köppen: udiri ugwu
Ka anyị lee ihe bụ nkọwa nke usoro iji chọpụta otu ihu igwe ọ bụla, ụdị na subgroup. A na-ekewa katalọgụ nke ihu igwe na ndị ọzọ ma na-ewepụta ahịhịa metụtara na mpaghara ebe a hụrụ ya.
Otu A: udu mmiri
N’ụdị ihu igwe a, ọ dịghị ọnwa nke afọ ọ bụla nwere okpomọkụ gbadara agbago ogo 18. Mmiri mmiri ozuzo kwa afọ dị elu karịa ogo evaporation. Ọ bụ maka ihu igwe dị n’ọhịa ebe okpomọkụ. N'ime otu A nke ugwu nwere ụfọdụ nkewa. Ndị a bụ ndị a:
Equatorial: Na ihu igwe a, ọ dịghị ọnwa ọ bụla nwere mmiri ozuzo n'okpuru 60mm. Ọ bụ ọnọdụ ihu igwe na-ekpo ọkụ ma kpọọ asị n'ime afọ niile nke enweghị oge. Ọ na-eme na Ecuador ruo ogo 10 ogo na ọ bụ ihu igwe nke oke ọhịa ụjọ.
Udu mmiri: naanị otu ọnwa dị n'okpuru 60mm ma ọ bụrụ na mmalite nke ọnwa kachasị akpọnwụ dị elu karịa usoro [100- (Annual precipitation / 25)]. Ọ bụ ihu igwe na-ekpo ọkụ n'afọ niile na obere oge ọkọchị na-esochi iru mmiri na oke mmiri ozuzo. Ọ na-adịkarị na West Africa na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Ọ bụ ihu igwe nke oke udu mmiri.
Akwa nsachi akwa: nwere ọnwa dị n'okpuru 60 mm ma ọ bụrụ na mmiri ozuzo nke ọnwa kachasị njọ bụ ihe na-erughị usoro [100- (Annual Precipitation / 25)]. Ọ bụ udu mmiri na-ekpo ọkụ n’afọ niile ma nwee oge ọkọchị. O yiri ka anyị si Ecuador pụọ. Ọ bụ ihu igwe dị na Cuba, nnukwu mpaghara Brazil, na ọtụtụ India. Ọ bụ ụdị nke savannah.
Group B: akọrọ climates
Ọdịda mmiri nke afọ na-erughị ike iwepụ kwa afọ. Ha bụ ihu igwe nke ala ahịhịa na ọzara.
Iji chọpụta ma ihu igwe dị nkụ, anyị na-enweta ụzọ mbata mmiri na mm. Iji gbakọọ ọnụ ụzọ ahụ, anyị na-amụba okpomọkụ ọ bụla kwa afọ site na 20, wee gbakwunye ma ọ bụrụ na 70% ma ọ bụ karịa nke ọdịda na-adaba na ọkara afọ ebe anyanwụ dị 280. Nke kachasị elu (Eprel ruo Septemba na mgbago ugwu, October ruo March na ebe ndịda), ma ọ bụ oge 140 (ọ bụrụ na mmiri ozuzo n'oge ahụ dị n'agbata 30% na 70% nke ọdịda niile), ma ọ bụ 0 ugboro (ọ bụrụ na oge dị n'etiti 30% na 70%) Ọdịda mmiri erughị 30% nke ngụkọta ọdịda.
Ọ bụrụ na ngụkọta mmiri ozuzo zuru ezu dị n'elu ọnụ ụzọ a, ọ bụghị ihu igwe B. Ka anyị lee ihe ihu igwe akọrọ:
Ọkụ steppe: winters ndị dị nwayọọ na oge okpomọkụ na-ekpo ọkụ nke ukwuu ọkụ. Mmiri ozuzo dị ụkọ na ahịhịa ndụ ya na-echere. Ọ na-apụtakarị na ebe okpomọkụ na subtropics na nsọtụ ọzara subtropical.
Oyi steppe: na ihu igwe a na udu mmiri dị oyi ma ọ bụ oke oyi. Anyị nwekwara ike ịchọta oge okpomọkụ ma ọ bụ udu mmiri na-enweghị obere mmiri ozuzo na Esteban dị ka ahịhịa nkịtị. Ha na-adịkarị na mpaghara ugwu dị jụụ ma dị anya site n'oké osimiri.
Ọzara na-ekpo ọkụ: Winters dị nwayọọ, ọ bụ ezie na mpaghara dịpụrụ adịpụ nwere ike ịbịaru ogo efu n'abalị. Oge okpomọkụ na-ekpo ọkụ ma ọ bụ na-ekpo ọkụ nke ukwuu. N’ebe ụfọdụ ihu igwe a dị, oge ọkọchị dị elu nke ukwuu, ma edewo nke kachasị n’elu ụwa. Mmiri ozuzo dị ụkọ. Ọ na-apụtakarị na nsọtụ subtropical nke akụkụ ugwu abụọ.
Ọzara oyi: na ihu igwe a na udu mmiri dị ezigbo oyi ma oge ọkọchị dị nwayọọ ma ọ bụ na-ekpo ọkụ. Mmiri mmiri ozuzo dị ụkọ na ahịhịa n'onwe ya bụ nke ọzara, mgbe ụfọdụ ọbụladị na-adịghị adị. E nwere ugwu ndị dị jụụ.
Nhazi ọkwa ihu igwe Köppen: otu C
N'ime otu C, anyị nwere oke ugwu igwe. Ọnọdụ okpomọkụ nke ọnwa kachasị oyi dị n'etiti -3ºC (na ụfọdụ nhazi ọkwa 0ºC) na 18ºC, na nke ọnwa kachasị ekpo ọkụ karịa 10ºC. A na-ahụ oke ohia na-ekpo ọkụ na ihu igwe ndị a.
Oké osimiri mberede: ọ nwere oge oyi ma ọ bụ obere oge oyi na udu mmiri dị mma. A na-ekesakwa mmiri ozuzo n'ime afọ. Enwere ahihia ndu nke bu oke ohia.
Osimiri subarctic: Ọ na-apụta maka inwe oge oyi na enweghị ezigbo ọkọchị. O nwere mmiri ozuzo n’afọ ọ bụla ma enwere ụfọdụ ebe ifufe siri ike nke anaghị ekwe ka mmepe ahịhịa.
MediterraneanHa nwere oge oyi na udu mmiri, ọkọchị ọkọchị. Ọtụtụ mmiri ozuzo na-ada n'oge oyi ma ọ bụ n'oge etiti. Oke Osimiri Mediterenian bụ ahịhịa nkịtị.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere nhazi ọkwa ihu igwe Köppen yana njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Köppen ihu igwe nhazi ọkwa
Igwe kpakpando nke Scorpio